Ila Qosol ... Ninkii Reer Miiga Ahaa Ee Jabuuti Usafray
Sunday April 04, 2021 - 10:48:26 in Articles by Hadhwanaag News
Ninkii reer baadiyaha ayaa garan waayey waxan loo haysto ee uu biiyey!
Haddaba si looga dhaadhiciyo waxa loo haysto awgeed, ayaa loo qabtay turjubaan (interpreter) soomaaliyeed oo ka dhaadhiciya dambigan loo haysto iyo xadhiggu wuxuu yahayba.
Turjubaankii ayaa u sharraxay, waxa lagu haysto iyo muddada lagu xukumayba . Markii uu arrintii fahmay ee lagu yidhi, " Saddex bilood ayaad jeelka fadhiyaysaa oo reerkaagii kuma noqonaysid;" ayuu isaga oo yaabban turjubaankii ku yidhi, " Walaalkay Saancadaalaha waxad ku tidhaahdaa, baylah badan baa ii taalla, riyihiina xilli xun bay dhaleen oo waaba saddex biloode; maalin keliya ma haleelayo ayuu ku yidhi ku dheh!!